Maitiro ekuti ushande kuAmazon | Kuumbwa uye kudzidza
Maitiro ekuenda kubasa kuAmazon
Maria Jose Roldan | 11/06/2021 12:00 | Jobho Kubuda
Amazon pasina mubvunzo imwe yemakambani akakosha kwazvo pasi rese. Kubudikidza nepeji rayo mamirioni avanhu vanotenga zvemarudzi ese zuva rega rega, vachiwana purofiti isingaenzanisike yekambani yakati. Zvese izvi zvaisakwanisika pasina vashandi vakura vane hofori bhizinesi iri.
Iwo mahofisi makuru ari mudunhu reSeattle uye nhasi munhu asina kuita imwe mhando yekutenga kuburikidza neAmazon haashoma. Vanhu vazhinji vanofunga kuti hazvigoneke kuve chikamu chevashandi vakuru vanoita kambani yakadaro, Zvisinei, Amazon inogara ichifamba uye inosanganisira vashandi vatsva kune vashandi vayo.
Muchinyorwa chinotevera isu tichakuudza maitiro ekuita chikamu cheAmazon uye izvo zvinodikanwa zvinofanirwa kuzadzikiswa nazvo.
1 Zvinorevei kushanda kuAmazon
2 Maitiro ekuenda kubasa kuAmazon?
Zvinorevei kushanda kuAmazon
Kana zvasvika pakuongorora akasiyana mabasa anopiwa kuAmazon, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kune akawanda mukuwedzera kune iwo akasiyana kwazvo. Izvi zvinodaro nekuti iyo network yezvigadzirwa yakakura kwazvo, kutsvaga dzimbahwe kwakapararira mudunhu reSpain.
Nezve muhoro wevashandi, zvinofanirwa kutaurwa kuti ndeimwe yepamusoro-soro muchikamu. Kunze kwemubhadharo wepasi, vashandi vanowanzo gashira mari yekuwedzera iyo inogona kufanana nehurongwa hwepensheni. Kunze kweizvi, kambani inotakura zvese zvinoshandiswa kuitira kuti vashandi vade kudzidzisa zvimwe zvakawanda kuti vasimudzirwe mukati mevashandi.
Chinhu chakanaka uye chakanaka chekujoinha kambani iyi inyaya yekuti zvemagetsi zvekutengeserana zvinogara zvichikwira uye zvinokura zvakanyanya zuva nezuva. Naizvozvo, Amazon ikambani yakasiya pfungwa dzakanaka kwechinguva uye kwemakore mazhinji. Naizvozvo, kushanda mukambani iyi kuchengetedza basa mune yepakati nepakati, chinhu chakakosha kwazvo mumakore atinomhanya.
Maitiro ekuenda kubasa kuAmazon?
Kana iwe uchifarira kuve chikamu cheiyi mammoth kambani, iwe unofanirwa kuisa yayo yepamutemo peji. Ikoko iwe unogona kuwana kupihwa kwemabasa uye matsva matsva emarudzi ese. Chinhu chakajairika ndechekuti makambani ekunze ari mukutungamira kwekusarudza kwevashandi vatsva vanozopinda muvashandi veAmazon. Kana zviri izvo zvinodiwa zvinodiwa zvinotevera:
Mvumo yekushanda inoshanda uye gara munyika munowanikwa chinzvimbo.
Unyanzvi mumutauro uri kutaurwa uye zvichienderana nenzvimbo kunoitikira basa.
Mamwe mabasa anoda rezinesi rekutyaira pamwe nekuva nemotokari.
Emakore mashoma e18 makore.
Chido chekudzidza uye mafungiro akanaka.
Kugona kushanda pakakwirira, kunyanya kana iko kupihwa kwebasa kuchinongedzera kuchimiro chekugadzirisa zvinhu. Muzviitiko izvi zvinotarisirwa zvakare kuti munhu agone kubata mitoro inopfuura gumi kilos pasina dambudziko.
Izvo zvinowanzo kudikanwa seimwe yeanodikanwa, kuti munhu haana kana dambudziko kana zvasvika pakukwanisa kushanda husiku.
Nezvemubhadharo kana izvo zvinopihwa nemushandi weAmazon, zvinofanirwa kuratidzwa kuti muhoro uchasiyana zvichienderana nebasa iro munhu wacho. Panyaya yekuendesa varume, inofungidzirwa kuti vanobhadharisa nezve 1.200 euros pamwedzi. Muchiitiko chekushanda mune logistics kana mudura, muhoro wacho unosvika kuma1.600 euros pamwedzi. Nenzira iyi, muhoro wepagore wemuAmazon wekuendesa munhu ndeye 10.000 euros pagore uye mune yemushandi wekuchengetera, iyo mubhadharo inosvika ku20.000 euros pagore.
Muchidimbu, Amazon ikambani inoramba ichikura iyo inogadzira mabasa mazhinji gore rese. Zvinopera pasina kutaura kuti isu takatarisana neimwe yemakambani akakosha kwazvo pasirese. Sezvawaona, izvo zvinodiwa kuti upinde muvashandi hazvisi zvekumanikidza. Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kungoenda kune iyo webhusaiti yeAmazon uye utsvage kwakasiyana basa kupihwa. Kubva ipapo, munhu wacho anogona kutsvaga nenzvimbo yebasa kana nenzvimbo yavanopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kuumbwa uye kudzidza » Studies » Jobho Kubuda » Maitiro ekuenda kubasa kuAmazon
Ungaita sei mumiriri wezvivakwa: matipi mashanu anobatsira
6 matipi ekushanda sechiitiko hostess